Isitatimende Sokukhululeka, Indawo Yamagugu Omhlaba | Izindaba Zokuhamba
I-UNESCO ibona isihloko seWorld Heritage Site ezindaweni ezithile emhlabeni ezikudinga ukugcinwa okukhethekile ngenxa yokubaluleka kwazo okukhulu kwezamasiko noma kwemvelo ezizukulwaneni ezilandelayo. Sekukonke, izindawo eziyizimpawu ezingama-911 zihlwiniwe emhlabeni wonke, ezingama-20 zazo zise-United States kanti eyodwa kuphela eNew York.
Okuwukuphela kwendawo evezwe yi-UNESCO njengeGugu Lomhlaba yi Isithombe senkululeko, yamenyezelwa kanjalo ngo-1984.
"Inkululeko ekhanyisa umhlaba", Igama langempela lalesi sithombe sodumo, kwakuyisipho esivela kwabaseFrance baya kwabaseMelika ngo-1886 futhi kwaze kwaba ngo-1902 sasisebenza njengesibani emanzini aseningizimu yeManhattan. Kwakungukudala usopolitiki u-Edouard Laboulaye futhi ngalesi sipho wayehlose ukufanekisela ubungani phakathi kweFrance ne-United States. Yenzelwe ukukhumbula iminyaka eyikhulu yeSimemezelo Sokuzimela, ngo-1876, kodwa ngenxa yezingqinamba ekwakhiweni kwaso, sayiswa eminyakeni eyishumi kamuva.
Incazelo yesithombe ichazwe ngegama layo, futhi isitembu sayo asimele nje i-United States kuphela, kepha ngokuhamba kwesikhathi saba wuphawu lwenkululeko kubantu abacindezelwe nakubantu emhlabeni wonke.
Isifanekiso simele Libertas (okusho ngesiLatin inkululeko), unkulunkulukazi wamaRoma wenkululeko ophule amaketanga engcindezelo ezinyaweni zakhe, okukhombisa ukuphela kobugqila. Engalweni yakhe yangakwesokudla uphethe ithoshi, kuthi ngengalo yakhe yesobunxele kubhebhe okuwusuku losuku lwesimemezelo senkululeko yase-United States of America, ngoJulayi 4, 1776. Emqhele wakhe kugqame amaphuzu ayisikhombisa, ezimele izwekazi ngalinye.
Namuhla yindawo enhle yokufunda nokuzwa ngomlando wokufuduka kwabantu baseNew York City.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » ISitatimende Sokukhululeka, Indawo Yamagugu Omhlaba